Sat, Jul 11, 2020 at 12:49pm
बैशाख २३ हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै फाइदा हुन्छ । हामी हास्दा हाम्रो शरीर पूर्ण रुपमा स्वतनत्र हुन्छ जसले गर्दा शरीरका अङ्गहरु पूर्ण बिकसित हुन् सक्छ। हाँसोमा आधारित योगा अभियान ‘वल्र्डवाइड लाफ्टर योगा मूभमेन्ट’ चलाइरहेका मुम्बईका चिकित्सक डा. मदन कटारियाको पहलमा सन् १९९८ देखि विश्व हाँसो दिवस सुरु भएको हो । यो दिवस हरेक वर्षको मे महिनाको पहिलो आइतबार मनाईन्छ । यसपटक..
विश्वास नहुने तर वास्तविक! सर्प बन्दै छिन् १३ वर्षीया बालिका ‘स्नेक गर्ल’
एजेन्सी,२२ वैशाख भारतकी १३ वर्षीया वेदिका गुप्ता ‘स्नेक गर्ल’ चिनिन थालेकी छन् । एक दुर्लभ रोगका कारण उनको शरीरको छालाहरु सर्पको जस्तो देखिन थालेपछि ‘स्नेक गर्ल’ चिनिन थालेकी हुन् । आनुवंशिक रोग लामल्लार इचथ्योसिसबाट पीडित उनी घामबाट जोगिन घरबाट बाहिर निस्कने गरेकी छैनन् । घाममा देखा पर्दा उनको छालाबाट रगत बग्ने गर्छ । दुई लाखमध्ये एक व्यक्तिलाई हुने उक्त दुर्लभ रोग लामल्लार इचथ्योसिसको..
भारतको केरलमा बस्ने एमपी रामचन्द्रन गत वर्ष एकाएक चर्चामा आएका थिए । पायनूर रेलवे स्टेशनमा रेल कुरिरहेका उनको तस्बिर एकाएक भाइरल भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै देखिने उनले चाँडै नै फिल्म खेल्ने भएपछि पुनः चर्चामा छाएका छन् । नोटबन्दीमाथि बन्न लागेको फिल्म स्टेटमेन्ट ८/११ मा उनी मोदीको भूमिकामा देखिने भएका छन् । फर्स्टपोष्टका अनुसार उक्त फिल्ममा रामचन्द्रनको तीन-चार वटा..
के तपाईं यहाँ दिइएका तस्बिर हेरेर बताउन सक्नुहुन्छ कि आखिर यसमा के भएको होला जसको वास्तविकता अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । शुक्रबार हामी तपाईंलाई केही यस्ता फोटो देखाउँदैछौं । यी फोटोमा केही मानिसहरुले यस्ता कुरा देखेका छन् जसको वास्तविकता थाहा पाउन निकै मुश्किल छ । माथि दिइएको इंगल्याण्डको स्रोपसायरको यो तस्बिरले धेरै मानिसलाई चकित तुल्यायो । वास्तवमा फुटबल वर्ल्डकप हेरेपछि..
दशकौंदेखि ओडारको बास, रूपसिंह सरे घरमा बुढेसकाल लागेपछि घरको ओछ्याको बास
चितवन १४, बैशाख : नयाँ पिँढिमा दुईवटा काठको फलेकमाथि बोरा ओछ्याएर आगन्तुकलाई नमस्कार गर्दै थिए ८० वर्ष कटेका रूपसिंह चेपाङ(प्रजा) । विहिवार विहानसम्म उनी ओडारमै थिए । दाताको सहयोगमा नयाँ घर बनेपछि विहिबारमात्रै स्थानीयले उनलाई सारेर नयाँ घरमा भित्र्याए । पिँढीमा हँसिलो मुद्रामा देखिएका रुपसिंहका सबै दाँत किराले खाएर कालै देखिन्थ्यो । आगन्तुकसँगै मजैले गफिंदै पनि थिए । ‘घर त बनायो, के खाएर..
को हुन् त डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै देखिने महिला, इन्टरनेटमा भइन् भाइरल !
काठमाडौं,१३ बैशाख स्पेनकी एक आलु किसान हाल इन्टरनेटमा चर्चामा छिन् । मानिसहरु उनको अनुहार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गरिरहेका छन् । आम रुपमा भाइरुल हुने अवस्थामा जस्तो यो परिघटनाको शुरुवात एक फोटोबाट भयो । डोलेरस लेइस एन्टेलो नाम उक्त महिलाले एक स्थानीय पत्रिका ‘ला भोज दे ग्यालिसिया’को लागि एक फोटो खिचाएकी थिइन् । यो फोटो पत्रिकामा उनको किसानको जीवनबारे छापिन लागेको..
विश्वकै सवैभन्दा जेष्ठ नागरिक ताजिमाको १ सय १७ बर्षको उमेरमा निधन
टोक्यो, ९ वैशाख : विश्वभरीका जिवित मानिसहरु मध्ये सवै भन्दा जेष्ठ सदस्य जापानी नागरिकको ११७ बर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरुले एएफपी समाचार समितिलाई आइतबार सो जानकारी दिएका छन् । जापानी महिला नाबी ताजिमाको ११७ बर्षको उमेरमा शनिबार बेलुका झण्डै ८ बजेतिर निधन भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले आइतबार समाचार संप्रेषण गरेका छन् । उनको जन्म सन् १९०० को अगस्ट ४..
अचम्म .....! भोजमा ‘रसबरी’ नदिएको भन्दै कुटाकुट, विहे नै रोकियो !
काठमाडौं ७, बैशाख : तपाईंले बिबाहमा आएका जन्ती फर्किएका विभिन्न कारणहरु सुन्नु भएको होला । जस्तो दाइजोका कारण जन्ती वा बेहुला विबाहबाट फर्कने, या त कुन झगडाका कारण फर्कने हामीले सुनेका छौं । तर यउटा यस्तो अनौंठो घटना सार्वजनिक भएको जसका कारण बेहुला बिबाह छोडेर गएका छन् । घटना छिमेकी राष्ट्र भारतको हो, जहाँ एक रसवरीका कारण पूरै जन्ती फर्किएको छ । भारत..
गर्मीबाट बच्न मानिसले यस्तो सम्म पनि गर्छन ! हेरौं हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु :
काठमाडौँ, ६ वैशाख पछिल्लो समय गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । गर्मीका कारण नै जनमानसमा तापक्रमकै कारण बेहोस हुने, ज्वरो आउने र खराब खाने कुरा खादा झाडाबान्ता लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने लगायतका रोगहरु लाग्ने हुन्छ । तर यति गर्मीमा पनि हाम्रो हाँस्यब्यङ्ग्य गर्ने चेतन हराएको छैन्। हिड्ने बाटोमा अण्डा तार्नेमिल्ने जस्तो गर्मी त हामी सबैले महसुस गरेकै हुनुपर्छ। चाहे हातेपङ्खाले जोड लगाएर हम्किएर होस या..
दम्पतीको मृत्यु भएको ४ वर्षपछि जन्मियो सन्तान, यस्तो छ रहस्य
काठमाडौँ ३०,चैत : २०७४ चीनमा कार दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका एक दम्पतीको चार वर्षपछि सन्तान जन्मिएको छ। बच्चा जन्माइदिन कोख भाडामा दिने ‘सरोगेट मदर’मार्फत् ती बालकको जन्म भएको हो । सन् २०१३ मा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा बच्चा जन्माउने आशामा उक्त दम्पतीले आफ्ना केही भ्रूण नबिग्रिने गरी कम तापक्रममा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। लाओसकी ‘सरोगेट’ आमामार्फत् ती बालकको जन्म गत डिसेम्बरमा भएको..
हाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा पहिरनको तस्विरहरु ! हेर्नुहोस् अनि हाँस्नुहोस्
काठमाडौँ,२३ चैत मानिसलाई विभिन्न प्रकारका सौख हुन्छ तर यहि शौख कहिले काँही उनीहरुलाई मजाकको पात्र बनाईदिन्छन् । त्यस्तै हामीले आज मानिसको पहिरनहरुको तस्बिर संकलन गरेका छौँ जुन देखेर तपाईहरुपनि हाँस्न बाध्य हुनुहुनेछ । बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछौँ । जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो रोक्न गाह्रो हुनेछ..
संसारमा यस्ता बकलोल दिमाग भएका मान्छेहरु पनि हुन्छन ? हेरौं केहि तस्विरहरु र हाँसौं दिल खोलेर !
काठमाडौँ, २९ फागुन मानिस एक विवेकसिल प्राणी हो तर पनि कहिले काँही उनीहरु यस्ता हर्कत गर्छन जसलाई देखेर हाम्रो हाँसो नै छुट्छ । बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछौँ । यी तस्विर समाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो रोक्न गाह्रो..
सेल्फी खिच्ने पनि तरिका हुन्छ नी ! संसारकै दश वाहियात सेल्फीहरु :
काठमाडौँ, ६ चैत तस्बिरमार्फत जीवनका महत्वपूर्ण पलहरुलाई स्मरणमा ताजा राख्ने इच्छा सबैमा हुन्छ । बजार स्मार्टफोनले पिटेको छ । जमाना नै स्मार्टफोनको जस्तो बनेको छ । त्यसैले उत्सवसँगै ‘सेल्फी’ र ‘विफी’ अनिवार्य बनेका छन् । फोटोग्राफी यी टर्मिनोलोजीले नयाँ ‘ट्रेन्ड’ स्थापित गराएका छन् । स्मार्टफोनको जमनामा सेल्फी खिच्नु प्रचलन झैं भएको छ । मोबाइलको क्यामेरा ठिक भएमा मौका मिल्ने वित्तिकै मानिसहरू सेल्फी खिच्न..
कस्तो अचम्म ! झापामा विवाह पछी भागे बेहुलो, बेहुलो भाग्दा रु ३५ लाख जरिवाना
सुरुङ्गा, झापा, ६ चैत । कसका बुबा आमाले सोचेको हुन्छ छोराको विवाह गर्दा रु ३५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर तर झापामा भइदियो यस्तै । दश महिना अघि टिकाटालो गरेर गत फागुन २० गते धुमधामका साथ विवाह गरेका बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ का २९ वर्षीय राकेश रेग्मी विवाहको भोलिपल्टै बेहुली छाडेर फरार भएपछि उनका बुबा लालप्रसाद रेग्मीले बेहुली फिर्ता गर्दै रु ३५ लाख जरिवाना तिरेका छन्..
सुन्दै अनौठो लाग्ने ! तलब बढी भएको भन्दै क्यानडाका डाक्टरहरु आन्दोलनमा !
काठमाडौँ, ५ चैत आफूहरुलाई दिइएको तलब सुविधा बढि भएको भन्दै क्यानडाका पाँच सय भन्दा धेरै चिकित्सकले विरोध गरेका छन् । चिकित्सकहरुले एक विरोध पत्रमा सामुहिक रुपमा हस्ताक्षर गर्दै आफूहरुलाई दिइएको सुविधा धेरै भएको बताएका हुन् । आफू भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा नर्सले काम अनुसार पारिश्रमिक नपाएको तर आफूहरुलाई भने आवश्यकता भन्दा धेरै तलब दिइएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले विरामीले पाउनुपर्ने..
के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? यो जुत्ताको मूल्य ३ करोड भन्दा बढी पर्छ !
काठमाडौँ, ३० फागुन राजकुमारी डायना तथा ग्रेस केलीले लगाउने जुत्ताको मोडलबाट प्रभावित भएर निर्माण गरिएको एउटा जुत्ताको मूल्य ३ करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । हातले निर्माण गरिएको यो हाई हिलको मुख्य विशेषता भनेको यो जुत्ताको नमुना यही मात्र हुनु हो । यसमा ५४ क्यारेटको सेतो हिरा, ४ सय १६ क्यारेटको निलमका साथै सुन तथा सेतो सुन जडान गरिएको छ..
यस्ता बकलोल जुक्तीहरु दिमागबाट कसरी निस्कन्छन् ? हेरौं हाँसो रोक्न नसकिने केहि तस्विरहरु !
जमाना पनि के आयो ! जापानमा मौलाउँदै 'सेक्स डल', सेक्स डलमा प्रेम खोज्दै जापानी पुरुष
जब टोकियोका ४५ वर्षीय फिजियोथेरापिस्ट मासायूकी ओजाकीको विवाहमा सुरुवाती अवस्थामा झैं प्रेम र जोश भएन तब उनले आफ्नो रोमान्टिक जीवनको रिक्ततालाई भर्नका लागि अचम्मको तरिका अपनाए । मासायूकीले सिलिकनको एक सेक्स डललाई घर ल्याए र अब त्यही सेक्स डल उनको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रेम बनेको छ । यो लाइफ साइज डमीको नाम मायू हो जसले मासायूकीसँग बेड सेयर गर्नुका साथै मासायूकीले..
भारतमा आफ्नै छोराको हातै काटिदिए बाबुले ! आखिर किन ? जान्नुहोस् कारण
के तपाइँको लुकिलुकी पोर्न हेर्ने बानी छ ?यदि छ भने सावधान रहनुहोस् किनकी आज हामी तपाईलाई यस्तो घटना बताउन गइरहेका छौं जसले तपाईंको होसै उडाईदिनेछ । यो घटना हो छिमेकि मुलुक भारतको । छिमेकी मुलुक भारतमा हालै मात्र एउटा गम्भिर घटना घटेको छ । आफ्ना १९ बर्षे छोराको एउटा लतबाट आजित बनेको बुवाले छोराको हात नै काटिदिएका छन् । मोबाइलमा पोर्न फिल्म हेर्ने छोराको..
किन विवाहपछि मोटाउँछन् अधिकांश महिलाहरु ? जानी राखौं
फागुन २३ काठमाडौँ । के तपाइलाई पातली केटि मन पर्छ ? कतै पातली केटि नै बिहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि ? यदि त्यस्तो हो भने तपाइले एक कुरामा सम्झौता गर्ने पर्छ । कुरो हो भने तपाइँले मन पराएकी स्लिम केटीको सरिर विहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । अर्थात् विहेपछि महिलाहरु मोटाउंदै जान्छन । उनीहरुको शरीर क्रमस भद्धा हुँदै जान्छ । अमेरिकामा..
हेर्नुहोस हाँसो थाम्नै नसकिने तस्विरहरु, दिल खोलेर हाँस्नुहोस् एकैछिन !
काठमाडौँ २२ फागुन : मानिस एक विवेकसिल प्राणी हो तर पनि कहिले काँही उनीहरु यस्ता हर्कत गर्छन जसलाई देखेर हाम्रो हाँसो नै छुट्छ । बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछौँ । यी तस्विर समाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए । जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो..
चीनको अर्को चमत्कार, बनायो ध्वनि भन्दा पाँच गुणा तीब्र गतिको विमान !
फागुन २१ एजेन्सी । चीनले विश्वमा अर्को चमत्कारको आबिस्कार गरेको छ । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताले ‘हाइपरसोनिक’ विमानको नयाँ खाका सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त खाका अनुसार ध्वनिको गतिभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी गतिको विमान बन्ने छ । बीबीसीले बताए अनुसार उक्त परिकल्पना अनुसार बेइजिङदेखि न्यूयोकसम्मको यात्रा केही घण्टामै पूरा गर्न सकिने छ । अहिलेका विमानमा यो दूरीको यात्रा गर्न १४ घण्टा लाग्छ ।यो बिमान सैन्य प्रयोजनका..
युवतीहरुलाई ‘सेक्स’ चाहना भएको कसरी थाहा पाउने? यो पढ्नुहोस् .....
काठमाडौँ, १६ फागुन भनाई नै छ : युवतीहरुलाई बुझ्न निकै गाह्रो छ । उनीहरुको मनको कुरो बुझ्ने पनि एउटा कला नै हो । झन् युवतीहरूको "सेक्स अपिल" को बारेमा बुझ्न त निकै गाह्रो काम हो । यदि तपाइले युवतीको सेक्स अपिल बुझ्नुभयो भने धेरै फाइदा पुग्नसक्छ । जुन केटी आफूलाई अति राम्री सम्झिन्छे, त्यसलाई तपाईले मात्र एक नजर लगाइदिनु भयो भने उसको..
एउटै गोत्रमा विवाह गर्दा के हुन्छ ? जानी राखौं !
एजेन्सी, १५ फागुन के तपाईको कसैसंग पिरती बसेको छ ? नेपाली युवायुवतीहरु आफ्नो जोडी बनाउदा पहिला गोत्रमा ध्यान दिन्छन् । पौराणिक मान्यतामा नै एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा छ । आजकल यो परम्पराको पालन मानिसले गर्दैनन् तर धर्मग्रन्थहरूमा सहगोत्री विवाहलाई निषेध गरिएको छ । हिन्दू धर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मान्यता छ । अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिलाई जेनेटिक रोग नलागोस्..
यस्तो पनि हुँदोरैछ ! जन्मनुभन्दा तीन वर्षअघि नै अपराधी ठहर
नुवाकोट, ११ फागुन नुवाकोटका एक नागरिक जन्मनु भन्दा तीन वर्ष अघिनै चोरी मुद्दामा दोषी ठहरिएर जेल चलान भएका छन् । पञ्चकन्या गाउँपालिका–५ साविक भदु्रटार–३ का नौले भनिने सानुवीरे तामाङ जन्मनु भन्दा तीनवर्ष अघि नै नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका छन् । चिरञ्जीवी भन्ने व्यक्तिको जाहेरीले सरकारवादी भएको चोरी मुद्दामा विसं २०१८ साल चैत ६ गते जन्मनुभएका..
डोनाल्ड ट्रम्पको अचम्म लाग्ने बानीहरु : जानी राखौं
एजेन्सी, ९ फागुन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदत नै हो समाचारमा छाईरहनु चाहे राम्रो छबि मा होस् या नराम्रो छबि मा। उनि सर्वाधिक विवाद र चर्चामा आईरहने अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । उनि निकै आक्रामक शैलीका छन् जहाँ आफुलाई मन नपरेको व्यक्ति बिरुद्ध उनि जे सुकै गरेर भयपनी गिराउन खोज्दछन् । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रस्तुत हुने उनको आक्रामक शैली नै चर्चामा..
आखिर किन आफ्नै दुध बेचेर जीवन गुजारा गर्छिन् यि युवती ? जान्नुहोस्...
एजेन्सी काठमाडौं, फागुन ७ । के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? बेलायतकी एक २६ वर्षीय युवतीले आफ्नै दुध दुहेर विक्री गरिरहेकी छिन् । हुन त मानिसलाई समय र परिस्थितिले जे पनि गर्न बाध्य बनाउछ । यो कुरा पत्याउन निकै गार्हो छ तर उन्ले अहिलेसम्म आफ्नो दुध बिक्रिबाट आफुले ३ हजार ७ सय पाउण्ड अर्थात् झण्डै ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको..
पटमुर्खताको पनि परिधि नाघेपछि...! हेर्नुहोस् हाँसो थाम्नै नसकिने केही तस्विरहरु
काठमाडौं, फागुन ६ । मानिसको बुद्दिमताको उदाहरणहरु हामी धेरै पाउन सक्छौं । ति मानिसहरु नै हुन् जस्ले देश हाँकेका छन्, कुनै विश्वमा राज गरेका छन् त कसैले ठूला–ठूला अविष्कार गरेका छन् । तर यस्ता पनि मानिस छन् जो यदि सम्म बुद्दु हुन्छन कि तिनीहरुलाई देखेर हाँसो नै लाग्छ । आज हामीले यस्तै मानिसहरुको तस्विर कलेक्शन गरेका छौं । हेर्नुहोस् केही हाँसो लाग्दो..
चिनियाँ महिला आफ्नो झोला लिन एक्स रे मेसिनमै छिरिन्
काठमाडौँ , ४ फागुन । हामी संग एक विश्वास नै नलाग्ने घटना छ जहाँ एकजना चिनियाँ महिलाले रेल सुरक्षाकर्मीको विश्वास नलागेर आफ्नो झोला नछोडी एक्स रे मेसिन भित्रै झिरेकी छिन् । चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन सर्वसाधारणहरू घर फर्किने चटारो भएका बेला गत आइतवार यस्तो अनौठो घटना भएको हो। दक्षिणी चीनको डुङ्गुआन रेल्वे स्टेशनका कर्मचारीहरू त्यतिबेला छक्क परे जब उनीहरूले एक्सरे मशिनमा एक..
हाँसो रोक्न नसकिने भाइरल केहि तस्विरहरु !
काठमाडौँ , ३ फागुन । बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछौँ । यि तस्बिरहरुमा सालिकलाई माध्यम बनाएर केहि रमाइला तस्बिर खिचिएको छ जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो रोक्न गाह्रो हुनेछ । यी तस्विर समाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए । १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ..
Results 603: You are at page 19 of 21